Akwụkwọ Erik Deckers na Martech Zone |
Edemede site na Erik Deckers
Nwunye m mechara nwee ohere iji dochie laptọọpụ 8 ya dị afọ asatọ, nke na-amalite ịrụ ọrụ dị ka nhazi okwu Nwanna si na njedebe 80s, ọ bụghị naanị ngwa ngwa. Ọ bụ Dell nwere RAM 512 MB, yana draịvụ RAM 80 MB. Ọ bụ nwayọ, nke na-adịghị agbanwe agbanwe, ihe mkpuchi crank ahụ apụwo n'ihu. O mechara zụta Samsung Netbook si Best Buy. Ọ dị mma, nke ahụ abụghị ezigbo blog-kwesịrị, mana enwere